Island Racer iyo ciyaaro kale oo wanaagsan oo iskutallaab ah oo lagu tijaabiyo Linux | Laga soo bilaabo Linux
Island Racer iyo ciyaaro kale oo wanaagsan oo iskutallaab ah oo lagu tijaabiyo Linux
Sida mid kasta Farsamada iyo Linuxero (Isticmaale Linux) oo leh wakhti firaaqo ah oo firaaqo iyo madadaalo leh, gaar ahaan wakhti firaaqo leh ku ciyaar Linux, anigoo ka baaraya shabakada waxaan ka helay ciyaar xiise iyo baashaal leh oo la yiraahdo Tartan jasiirad.
Tartan jasiirad waa ciyaar tartan qurux badan, indho qabad iyo madadaalo leh oo lala barbar dhigo ciyaaraha kale ee qaabeynta badan oo ka kooban qaybo kala duwan, kuwaas oo si fudud looga soo dejisan karo oo loogu isticmaali karo Linux.
Xaqiiqdii Linuxers waxaan haysanaa fursado badan oo laga heli karo ciyaaraha iyo ciyaarta emulators la heli karo, in lagu rakibo oo si toos ah looga ciyaaro keyd ama keyd dibadeed, ama iyada oo loo marayo codsiyo awood leh oo deggan, sida gamehub, Itch.io, Lutris y Steam.
Si kastaba ha noqotee, waligeed dhib malahan inaad ku dhex wareegto shabakadda oo aad soo ogaato bogag xiisa leh oo noo oggolaanaya inaan ogaano oo aan sahamino kuwa kale beddelka ciyaarta, labadaba waa bilaash, furan oo bilaash ah iyo mid xiran, mid gaar loo leeyahay iyo mid lacag leh Sida oo kale, markan waxaan kuugu soo bandhigayaa Tartan jasiirad iyo ciyaaro kale oo walaalo ah.
1 Island Racer: Waa ciyaar orod casri ah oo baashaal ah
1.1 Sharaxaadda ciyaarta
1.2 Soo Degso oo Isticmaal
Island Racer: Waa ciyaar orod casri ah oo baashaal ah
Ta sida hadalkaaga ah degel rasmi ah, kulankaan waxaa lagu tilmaamay:
"Ciyaar xiiso leh oo lagu tartamo oo kaligiis la ciyaari karo, kombiyuutarka, ama khadka tooska ah ee ciyaartoy kale. Jasiiradda Racer waxay leedahay awood gaar ah oo ay ku abuuri karto muuqaallo cusub iyo waddooyin asal ah, oo siinaya isku-darka aan dhammaadka lahayn ee raadadka waayo-aragnimo cusub oo tartan kasta ah Xulo gawaarida iyo midabada kala duwan si aad ugu tartanto madax-ilaa-madaxa. Xulo wareegga On-or Off-Road oo ku raaxee! Isku dhaca qofka kaa soo hor jeeda ayaa kuu oggolaanaya inaad faa'iido hesho. Island Racer waa sahlan tahay in la ciyaaro oo ay ka buuxaan daqiiqado xiiso leh". Ciyaaraha Jasiiradda Bilaashka ah Download.
Ciyaartan iyo kuwa kale ee lagu martigaliyay websaydhka la yidhi ayaa laga yaabaa lagu soo dejiyey bilaash, labadaba Windows, Mac ama Linux. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa wuu awoodaa, lacag bixinta, helitaanka furitaanka astaamaha cusub (adduunyada, heerarka, shaqooyinka, isagoo awood u leh inuu dhammeeyo ciyaarta (ciyaarta / adduunka) iyo kuwa kale). Sidoo kale, jidkiisa rakibidda iyo / ama isticmaalka waa mid aad u fudud oo la yimaada rafcaanka haysashada Taageerada luuqada Isbaanishka. Sidaa darteed, sidaan horay u sheegnay, degelkan aad buu faa'iido ugu leeyahay isku day ciyaaro cusub.
Waa a ciyaarta tartanka online ciyaaryahan kale, inkasta oo lagu ordi karo gudaha kombiyuutarka. Tartan jasiirad leeyahay muuqaallo cusub iyo raadad si aan kala sooc lahayn loogu sameeyay tartamada wadada iyo banaanka, iyo xulashooyinka tartanka ee aan dhamaadka lahayn kaligaa ciyaaro ama tartan. Ciyaartoydu waxay kala doortaan gawaarida iyo midabada kala duwan si ay ugu tartamaan madax-ilaa-madaxa. Waa ciyaar fudud oo lagu ciyaaro jawi wanaagsan oo muusiko ah.
Soo Degso oo Isticmaal
Tartan jasiirad oo sida xaqiiqada ah ciyaaraha kale ee ku yaal degelkan, markii aad u soo dejiso Linux, ku soo gal feyl isku-fiiqan hoostiisa Qaabka "* .zip", kaas oo marka la jajabiyo ka dib leh a faylka fuliya, labadaba gelinno 32 sida gelinno 64. Marka ciyaarta la fuliyo, iyadoo la adeegsanayo guji fudud, waxay ku bilaabataa dhibaato la'aan, illaa iyo inta Linux Distro ayaa loo habeeyay fulinta. Kiiskeyga, waxaan isticmaalaa a MX Linux Respin Shaqsiyeed loo yaqaan Mucjisooyinka, oo dhowr ka mid ah ay ka soo shaqeeyeen dhibaato la'aan.
Kiiskeyga, sidoo kale waxaan ku raaxeystay isku dayga mid la yiraahdo Mooto iyo Domino. Inta soo hartay, waxaa jira kuwa kale oo badan oo xiiso leh oo aan isku dayno markaan helno waqtiga firaaqada iyo madadaalada la heli karo.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan ciyaarta «Island Racer», taas oo ah ciyaar-xiiso leh oo lagu tartamo oo kaligiis la ciyaari karo, kombiyuutarka ama khadka tooska ah ee ciyaaryahanka kale, oo ay soo saartay shirkadda «baKno games», kaas oo sidoo kale bixiya ciyaaro kale oo xiiso leh oo xiiso leh oo la isku dayo, inay noqdaan kuwo aad u xiiso badan iyo waxtar leh, dhammaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Island Racer iyo ciyaaro kale oo wanaagsan oo iskutallaab ah oo lagu tijaabiyo Linux
PC Pocket wuxuu u dhaqaaqay inuu furo qaybta qalabka